Ihe ndị a bụ akwụkwọ ọhụrụ ndị MWC 2016 hapụụrụ anyị | Akụkọ akụrụngwa
Ihe ndi a bu isi akwukwo ndi MWC 2016 hapuru anyi
Villamandos | | Ngwa, Noticias
Ikpeazụ Thursday 25 na Nzukọ Ndị Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi mechiri ọnụ ụzọ nke mbipụta ọhụrụ, nke atụmanya nke ndị ọbịa gafere na nke jupụtakwa na akụkọ na-atọ ụtọ. N'adịghị ka afọ ndị ọzọ, na mbipụta a nke MWC ma ọ bụrụ na anyị ahụla ngosi dị mkpa nke ngwaọrụ na ihe atụ LG, Xiaomi ma ọ bụ Sony chọrọ ịbanye na Samsung na, dị ka afọ ọ bụla, ewepụtala ọkọlọtọ ọhụrụ ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Sunday 21 bụ ụbọchị kachasị adọrọ mmasị na ihe omume ahụ dum, dịka ọ na-emekarị kwa afọ, nke ka njọ ụbọchị niile nke emechiri emechi MWC ahụ wee hụ ngwaọrụ ndị dị egwu. Ọ bụrụ na ị tufuru nke ọ bụla, n'isiokwu a anyị ga-egosi gị ihe kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ndị isi na ahịa teknụzụ wepụtara.
1 Samsung Galaxy S7 na S7 Edge
2 LG G5
3 Sony Xperia X
4 Xiaomi Mi5
6 BQ M10 Ubuntu Mbipụta
Samsung Galaxy S7 na S7 Edge
Otu n'ime nnukwu protagonists nke MWC 2016 doro anya bụ Samsung na ngosi nke ọhụrụ Galaxy S7 na S7 Edge. Nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ South Korea na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mkpa na ahịa ekwentị mkpanaka yana ọkwa ọhụrụ ya bụ otu n'ime ama ama ama ama ama na ahịa.
Ihe ohuru nke Galaxy S7 adighi enye ndi oru otutu ihe ohuru, obu ezie na enwere otutu ihe nke juru anyi anya. Ọzọ, anyị ga-enyocha isi nkọwa nke ọnụ ọhụụ ọhụrụ a.
Akụkụ: 142.4 x 69.6 x 7.9 mm
Arọ: gram 152
Ihuenyo: 5,1 inch SuperAMOLED na mkpebi QuadHD
Processor: Exynos 8890 4 cores na 2.3 GHz + 4 cores na 1.66 GHz
Nchekwa RAM nke 4GB
Ebe nchekwa dị n'ime: 32 GB, 64 GB ma ọ bụ 128 GB. All nsụgharị ga-expandable site microSD kaadị
Igwefoto buru ibu 12 megapixel. 1.4 um pikselụ. Teknụzụ Pixel Abụọ
Batrị: 3000 mAh na ngwa ngwa na ikuku na-akwụ ụgwọ
Jụrụ na mmiri mmiri usoro
Gam akporo 6.0 Marshmallow sistemụ arụmọrụ na Touchwiz
Njikọta: NFC, Bluetooth, LTE Cat 5, WiFi
Ndị ọzọ: SIM abụọ, IP 68
Otu ubochi nke Samsung gosiputara LG kwuputara LG G5, smartphone nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, ụfọdụ n'ime ha na-eju anya ịsị nke kacha nta.
Ma ọ bụ na LG achọghị ịgbaso ụzọ akara maka oge ụfọdụ, wee kpebie imebi atụmatụ LG G4 wee nye ndị ọrụ ọhụụ ọhụụ, nke na-enyekwa anyị ohere ịbawanye nkọwa nke ọnụ ọnụ ekele ahụ a na-akpọ Ime Anwansi, nke na-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, ịgbatị batrị nke ngwaọrụ ma ọ bụ melite ogo dị mma site na usoro ụda ọhụrụ.
Ma ị maghị isi atụmatụ na nkọwa nke LG G5 a? Lee anyị gosipụtara ha;
Akụkụ: 149,4 x 73,9 x 7,7 mm
Arọ: gram 159
Processor: Qualcomm Snapdragon 820 na Adreno 530
Ihuenyo: 5.3 sentimita asatọ na Quad HD IPS Quantum mkpebi na mkpebi nke 2560 x 1440 na 554ppi
Ebe nchekwa: 4 GB LPDDR4 RAM
Nchekwa dị n'ime: 32GB UFS gbasaa site na kaadị microSD ruo 2TB
Igwefoto azụ: Igwefoto abụọ nke nwere ihe mmetụta 16 megapixel yana 8 megapixel obosara
N'ihu: 8 megapixels
Batrị: 2,800mAh (nke mbughari)
Gam akporo 6.0 Marshmallow sistemụ nrụọrụ nke LG nwere nhazi nkewa
Netiba: LTE / 3G / 2G
Njikọta: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, AC / USB Type-C) / NFC / Bluetooth 4.2
Ọtụtụ tụrụ anya na Sony ga-ekpughere Xperia Z6 ọhụrụ ahụ, mana ọ dị ka anyị agaghị ahụ ọnụ ahụ dịka okwu ikpeazụ nke ndị ọrụ maka ụlọ ọrụ Japan ahụ siri dị. Iji mebie Z6 a tụrụ anya ya, Sony gosipụtara ezinaụlọ ọhụrụ X X ọhụrụ, nke mejupụtara 3 smartphones, etiti abụọ dị iche iche nke ọkwa dị iche iche dịka Xperia X na Xperia XA, na arụmọrụ Xperia X nke nwere ike mechaa bụrụ otu n'ime njedebe kachasị mma nke akpọrọ oke elu.
N'ikpeazụ, enweghi ohere maka mbadamba nkume ọhụrụ, dịka o kwesịrị ịbụ nke doro anya, ọ bụ ezie na anaghị achịkwa ya maka ụbọchị ole na ole sochirinụ na ọ bụ na Sony na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'echeghị na ahịa ahụ nke na-ada n'oge na-adịbeghị anya.
Xiaomi abughi oge obula na Mobile World Congress ma obu ma obu opekata mpe na ọnụọgụ dị mkpa. Onye na-emepụta ndị China nke afọ a gosipụtara ọhụrụ na ihe omume Barcelona Mi5, smartphone dị ike ma nụchaa nke ahụ ga-akụ ahịa nwere oke ọnụ ahịa ga-emeri obi ọtụtụ ndị ọrụ.
Na a dị nnọọ mma n'anya, a 5,5-anụ ọhịa ihuenyo na nnukwu ike zoro n'ime anyị na-ahụ Xiaomi Mi5 karịa ihe na-atọ ụtọ. Ke adianade do, igwefoto, otu n'ime ihe ndị kasị mkpa akụkụ nke ọ bụla ama, bụ adịghị anya n'azụ ndị ọzọ na-elu-ọgwụgwụ ngwaọrụ na bụ na-arụpụtara site Sony, ịga nke ọma yiri ihe doro anya.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mara njirimara na nkọwa nke ọnụ ahịa a, n'okpuru anyị ga-egosi gị n'ụzọ zuru ezu;
Akụkụ: 144.55 x 69,2 x 7.25 mm
Arọ: gram 129
5,15-inch IPS LCD ihuenyo nwere mkpebi QHD nke 1440 x 2560 pikselụ (554 ppi) na nchapụta nke 600 nits
Ihe nghazi Snapdragon 820 Quad-isi 2,2 GHz
Adreno 530 GPU GPU
3/4 GB nke Ram
32/64/128 GB nke nchekwa dị n'ime
Igwefoto igwefoto 16 megapixel nwere oghere 6P na 4-axis OIS
4 megapixel igwefoto nke abụọ
Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, band-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; Bluetooth 4.1; Nkwado A-GPS, GLONASS
USB Cdị C
Ihe mmetụta mkpịsị aka Ultrasound
3.000 mAh na Quickcharge 3.0
Xiaomi na mgbakwunye na Mi5 egosipụtakwala ya Mi4s, ọnụ na-adọrọ mmasị n'etiti etiti na nnukwu myirịta na ngwaọrụ ndị ọzọ na ahịa.
Huawei emeworị ọtụtụ n'ime ọrụ ya tupu MWC ma e wezụga Nwunye, ihe na-adọrọ mmasị ngwakọ dị n'etiti laptọọpụ na mbadamba, enweghị ngwaọrụ ọ bụla ọzọ.
Ee, jiri ohere ahụ gosi anyị di na nwunye ọhụrụ S, di na nwunye 8 ma ọ bụ G8, ọnụ ahịa atọ na-atọ ụtọ dị na ahịa.
Maka Huawei P9 o yiri ka anyị ga-echere izu ole na ole ebe ọ bụ na e mechara nye ya na MWC, dịka a nụchara ya na ụbọchị tupu mmalite nke ihe omume ahụ.
BQ M10 Ubuntu Mbipụta
Spanishlọ ọrụ Spanish BQ mere ka ọ pụta ìhè na mbụ na nnukwu ihe ịga nke ọma na Mobile Mobile Congress nke 2015. Na 2016 ọ kwughachiri ọnụnọ ya ma gosipụta anyị usoro ngwaọrụ ọhụrụ nke kpaliri mmasị dị ukwuu site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile.
El Aquaris X5 na Aquaris X5 gbakwunyere Ndị a bụ ihe ọhụụ abụọ dị ukwuu site na BQ, nke na-enye anyị arụmọrụ pụrụ iche, yana usoro ọkaibe na akpachapụ anya na-arịwanye elu, mana karịa ihe niile na ọnụahịa dị n'ime iru onye ọ bụla.
Na mgbakwunye Ha ewepụtawo M10 Ubuntu Edition, nke bụ nzọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Spanish maka sistemụ arụmọrụ Ubuntu. Nke a bụ mbadamba mbụ na Ubuntu yana ngwaọrụ na-adọrọ mmasị, kọntaktị n'etiti mbadamba na kọmputa.
Alcatel gara n'ihu na-anwa ị nwetaghachi ọnụnọ ya n'ahịa ekwentị mkpanaka yana maka ebumnuche a, na MWC, ọ gosipụtarala ọdụ ọhụrụ abụọ, nke Alcatel One Touch Idol 4 na Alcatel One Touch Idol 4s, ngwaọrụ mkpanaka abụọ nwere 5,2 na 5,5 nke anụ ọhịa na-ekwe nkwa inye ọtụtụ agha na ahịa.
Ha abụọ bụ ndị na-anọchi nke arụsị nke ọma 3 nke jisiri ike tinye Alcatel n'etiti otu ndị nrụpụta ama ama.
N'ikpeazụ, anyị achọghị ichefu banyere ZTE, nke eze ọkọnọ Agụba V7, smartphone nwere ihe mara mma na ihe kariri njirimara na nkọwa ziri ezi, ọ bụ ezie na ịghọghị ọdụ dị ịrịba ama, nke site n'ụzọ ha si chefuo itinye oghere maka kaadị microSD na-ewu ewu.
Otu afọ ọzọ the Mobile World Congress ewetala anyị ihe ngosi nke smartphones na ngwaọrụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ ndị ga-abụ ezi ndị eze nke ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ. N'ezie, na ihe omume a enwere nnukwu nleghara anya na anyị nwere olile anya ịhụ ọtụtụ ndị ọzọ wearables na ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ ga-adọrọ uche anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ihe ndi a bu isi akwukwo ndi MWC 2016 hapuru anyi
Mbadamba ụrọ 8 ”Windows Lego Edition, mbadamba ihe na-adọrọ mmasị na Windows 10
Ebee ihu Oscars 2016 bi na Ntaneti